Horudhac: Manchester City vs Arsenal… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka dib u soo laabashada EPL ee ka dhacaya Etihad) – Gool FM
(Manchester) 17 Juun 2020. Horyaalka Premier League ayaa caawa dib u soo laabanaya iyadoo ay madaxa is-gelin doonaan kooxaha waa weyn ee Manchester City iyo Arsenal, tan iyo markii uu kubadda cagta hakad geliyey Coronavirus.
Manchester City waxay garoonkeeda Etihad Stadium ku qaabilaysaa Arsenal oo ay iskaga hor imanayaan kulan baaqi ugu ahayd xilligii ay kooxda Tababare Pep Guardiola ciyaaraysay final-ka Carabao Cup.
Dhinaca kale Macallin Mikel Arteta oo hoggaaminaya Arsenal ayaa markii ugu horreysay u safraya garoonka Etihad tan iyo markii uu ka soo tagay oo ay Gunners u magacowday tababaraheeda.
Taariikhda: Arbaco 17 Juun 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 10:15 fiidnimo xilliga geeska Afrika.
Tababaraha kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa sheegay in ciyaartoydiisa aysan weli taam buuxa aheyn, laakiin wax dhaawac ah oo soo gaaray ma uusan soo sheegin.
Aymeric Laporte ayaa laga yaabaa inuu soo laabto kaddib markii uu seegay saddexdii kulan ee ugu danbeeyay ee City isagoo dhaawac muruqa ah qaba, halka Leroy Sane uu ciyaari karo kulankiisii ​​ugu horreysay ee sare tan iyo markii uu dhaawac jilibka ah soo gaaray bishii Agoosto ee la soo dhaafay.
Dhinaca kale Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa sheegay inuusan shaki ka qabin wax dhaawac ah.
Ciyaartan ayaa sidoo kale hoosta ka soo gashay oo dhaqsi ku ah xiddigaha mudada dheer maqan ee Lucas Torreira iyo Calum Chambers, kuwaasoo caafimaadkooda dib u soo kabanaya.
>- Manchester City ayaa guuleysatay lixdii kulan ee ugu dambeysay oo horyaalka iyo koobabka ah ee ay la ciyaareen Arsenal, waana guushoodii ugu dheereyd ee ay ka gaaraan Gunners.
>- Arsenal ayaa laga badiyay shantii kulan ee ugu danbeysay ee horyaalka – waana rikoorkooda ugu dheer ee sidaan oo kale ah marka loo fiiriyo koox gaar ah tan iyo todobo kulan oo isku xigta oo ay ka horyimaadeen Ipswich intii u dhaxeysay 1974 iyo 1977.
>- Guushii ugu dambeysay ee Gunners ay ka gaartay Kooxda Man City waxa ay aheyd semi-finalkii FA Cup-ka ee sanadkii 2017-kii.
>- Tababare Pep Guardiola ayaan marnaba guuldarro la kulmin isagoo garoonkiisa kula ciyaaraya Arsenal xirfaddiisa macallinnimo, waxa uu guuleystay lix ka mid ah todobo kulan oo uu garoonkiisa ku qaabilay Gunners.
>- The Gunners ayaa barbaro soo geli karta lix kulan oo isku xigta oo ay marti tahay ama ay ku ciyaareyso meel ka baxsan garoonkeeda kulammada horyaalka markii ugu horreysa taariikhdeeda.
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa dhaliyey 49 gool 75 kulan oo uu saftay horyaalka Premier League, haddii uu gool dhaliyo kulanka caawa, waxa uu noqon doonaa xiddigii lixaad ee sida ugu dhaqsiyaha badan ku gaara 50 gool tartankan.
Barcelona oo garoonkeeda Camp Nou saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Leganes… +SAWIRRO
Horudhac: Napoli vs Juventus… (Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Final-ka Coppa Italia ee caawa ka dhacaya Rome)